50 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeymo Mareykanku asbuucaan ka geystay gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomalia50 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeymo Mareykanku asbuucaan ka geystay gobolka Mudug
50 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeymo Mareykanku asbuucaan ka geystay gobolka Mudug
November 23, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqeymo is xig-xiga oo Mareykanku asbuucaan ka geystay gudaha Soomaaliya, ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 50 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Duqeyntii ugu horeysay asbuucaan ayaa Isniintii ka dhacday deegaan kuyaala gobolka Mudug, waxayna Taliska Mareykanka ee Afrika sheegeen in 37 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsanaa lagu dilay.
Talaadadii, duqeyn kale oo ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug, waxa uu Mareykanka sheegay in ay ku dileen todobo dagaalyahan.
Duqeyntii ugu dambeysay ayaa Arbacadii ka dhacday deegaanka Xaradheere ee gobolka Mudug, waxaana Taliska Mareykanka ee Afrika bayaan ay sii daayeen Khamiistii ku sheegeen in lix dagaalyahan lagu dilay, laguna burburiyay hub.
Dhammaan duqeymaha ayaa ka dhacay gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Waxay u muuqataa in milatariga Mareykanku uu hadda bartilmaameedsanayo maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gobolada kale ee dalka marka laga tago koonfurta oo duqeymo badan ay ka fuliyeen.
Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya tan iyo horaantii sanadkii 2017-kii.
Xisaabiye xarun ganacsi oo lagu dilay magaalada Boosaaso
NISA oo miinada dhulka lagu aaso ku fashilisay gudaha Muqdisho
Kenya oo kordhisay wakhtiga cafiska guud ee ay u fidisay dhalinyarada Al-Shabaab ku biiray
Nairobi-(Puntland Mirror) Kenya ayaa shalay oo Sabti ahayd u kordhisay wakhti aan xad lahayn u soo bandhigida cafis guud dhalinyarada kuwaasoo ay jiideen ayna xagjireeyeen kooxda A-Shabaab kadib markii loo balanqaaday taageero dhaqaale. Isku-duwaha gobolka [...]
Madaxweynaha Soomaaliya oo u safray dalka Uganda
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah u safray dalka Uganda. Inta uu safarkiisa ku joogo Uganda, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan la qaadan doona dhiggiisa Uganda Yoweri Museveni, [...]
Ciidamada Puntland iyo Galmudug oo howlgal amni oo wadajir ah ka bilaabay Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ka bilaabay howlgal lagu xaqiijinayo amniga magaalada. Howlgalka wadajirka ah ayaa bilaabmay habeenimadii xalay, sida ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan ay u sheegeen [...]